के तपाईंलाई छिन-छिनमा पिसब लागि रहन्छ ? यसो गर्नुहोस् – mero sathi tv
On २४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १३:१४
डा. सुमन चापागाई, यूरोलोजिष्ट
सामान्यतया एक स्वस्थ व्यक्तिले दिनमा ४ देखि ६ पटकसम्म पिसाव फेर्ने गर्छ । तर यस भन्दा धेरै पटक वा तारन्तार पिसाब लागेमा समस्या भएको पनि हुन सक्छ । छिन छिनमा पिसाव लाग्नु आफैमा रोग नभएपनि धेरै प्रकारको रोगको लक्षण भने हुनसक्छ । एउटै कारणले मात्र छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने भन्ने हुँदैन ।
बिरामीमा विभिन्न समस्यामा देखिने यस्तो लक्षण साधारण पनि हुनसक्छ । जुन आफै निको भएर जाने पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ मुख्य लक्षणका रुपमा देखिन्छ । यसरी छिटो–छिटो पिसाब जाने अवस्थालाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ ।
छिटो छिटो पिसाब लाग्ने समस्या उमेर अनुसार, रोगको प्रकृति अनुसार बच्चा देखि बृद्धसम्म तथा महिला पुरुष दुवैमा फरक–फरक हुन्छ । यो सबै उमेर समूहलाई हुनसक्ने समस्या भएपनि उमेर अनुसार फरक पर्न सक्छ । साधारण समस्यामा पनि पिसाब छिटो छिटो पिसाब लाग्ने समस्या देखिन्छ भने ठूलो रोगको लक्षणको रुपमा पनि समस्या देखा पर्न सक्छ ।
मृगौला, पिसाबथैली, पिसाब नली आदिमा हुने संक्रमणले छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने हुन्छ । सबै संक्रमणका कारण पिसाव छिटो छिटो हुने सम्भावना रहन्छ ।
रोगकै कारणको रुपमा हेर्र्दा क्षयरोग, पिसावनलीको क्षयरोगमा पनि छिटो छिटो पिसाब लाग्ने हुन्छ । उमेर अनुसार बृद्धावस्थामा रगत मिसिएको र पिसाबथैलीको संक्रमणका साथै क्यान्सरको पहिलो लक्षण पनि हुनसक्छ ।
पिसाव थैलीमा ट्युमर भएमा पनि यस्तो समस्या हुने सम्भावना रहन्छ । बृद्धावस्थामा प्रोष्टेडमा कुनै पनि संक्रमण भएमा, पिसाब सँगसँगै रगत आएमा फरक–फरक रोगको संकेत हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ नशासम्बन्धी रोग लागेर पिसाब थैलीमा समेत असर गरेमा पनि यस्ता लक्षण देखा पर्नसक्छ । जसलाई न्यूरोजेनिक व्ल्याडर भनिन्छ ।
ढाडमा चोट लागी नशा सम्बन्धी समस्या भएर पिसाब थैलीमा असर गरेमा पनि छिटो छिटो पिसाब आउने सम्भावना रहन्छ । छिटो छिटो पिसाब लाग्ने र धेरै पिसाब लाग्नुमा फरक छुट्टयाउन जरुरी हुन्छ ।
छिटो छिटो पिसाब लाग्नु भनेको पिसाब फेर्न पटक पटक जाने तर थोरै मात्रामा पिसाब आउने हुन्छ । अर्को सामान्य भन्दा धेरै आउने हुन्छ । यसलाई पोलीयुरीया भनिन्छ । जसको छिटो छिटो पिसाब आउने समस्यासँग कुनै सम्वन्ध रहेको हँुदैन ।
यो समस्या विशेषगरी मधुमेहको लक्षण हो । गर्भवती अवस्थामा पनि छिनछिनमा पिसाब लाग्ने लक्षण देखा पर्नसक्छ, जुन पछि आफै हराएर जान्छ ।
महिलाहरुमा महिनावारी बन्द भएमा वा बन्द हुने क्रममा रहेका महिलामा संक्रमण भइ छिनछिनमा पिसाब लाग्ने समस्या देखापर्न सक्छ । कहिलेकाहीँ पिसाब थैलीको द्वार साँघुरो हुदै जाँदा पिसाब राम्रोसँग ननिख्रिएर थैलीमै बाँकी रहने हुँदा समस्या देखापर्छ ।
साधारणदेखि ठूलो समस्यालाई उमेर अनुसार लक्षणको आधारमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण पिसाबको जाँच, संक्रमण पत्ता लगाउन युरीन कल्चर जस्ता परीक्षण गरिन्छ ।
यस बाहेक रोगको लक्षण अनुसार अल्ट्रासाउण्ड, सिटीस्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट साधारण संकमणबाट पिसाव थैलीमा संक्रमण भएको अवस्थाका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । साथै आवश्यक्ता अनुसार सिस्टोस्कोपी गरेर पिसाब थैली वा पिसाब नलीमा जाँच गरिन्छ ।
यस्तो समस्यामा पिसाब थैलीको संक्रमण हुने हँुदा प्रशस्त मात्रामा पानी पिएर रोकथाम गर्न सकिन्छ । आवश्यक्ता अनुसार रोगको परीक्षण पछि उपचार प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्छ । कहिले काँही शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ तर, धेरै जसो समस्यामा औषधिको सेवनबाट पनि समाधान हुन्छ ।
छिनछिनमा पिसाब लाग्ने समस्या देखिएमा एक पटक युरोलोजिष्टसँग जाँच गराई सल्लाह लिँदा राम्रो हुन्छ । शुरुकै अवस्थामा रोग पत्ता लगाउन सके कुनै ठूलो रोग लाग्ने सम्भावनाबाट बच्न सकिन्छ ।
यी हुन् मानिसमा हुनुपर्ने ३२ लक्षण ! यसमा तपाईको कतिओटा लक्षण मिल्यो ?